Mihena ny tsindry amin'ny rano → Ahoana no fiasan'io? • Ahoana no hanadiovana? • Ahoana no fomba hametrahana?
Ny fanerenan'ny tsindry amin'ny rano, ny fitsipahana miaraka amin'ny refy fanerena sy tsindry. Miova ny fanerena rano mitranga amin'ny rafitry ny rano matetika matetika, avy amin'ny hafa, avy amina rafitra voaforona tsy mety na mitranga amin'ny alina, rehefa ny fihinanana rano tsy ampy dia mitombo ny fanerena azy amin'ireo fantsona, izay mety hanimba ny rafitra sy fitaovana mifandray aminy, ary manala ny mpampiasa azy amin'ny vidiny tsy ilaina.
Fametrahana reducer tsindry ny rano dia hampihena ny tsindry mavesatra be loatra, hitahiry ny tsindry matetika ny rafitry ny rafitra, raha toa ka ny fihenan'ny tsindry anaty anatiny, manampy amin'ny fitahiry ny rano amin'ny fisorohana ny fihoarany tafahoatra, ny fanesorana ny mety ho voan'ny rano ary hampihena ny tabataba ary ny tabataba ateraky ny fandidiana ny rafitry ny rano.
Ireo mpitazona tsindry amin'ny rano dia apetraka ao aoriana metatra ny rano i sivana rano amin'ny tariby herinaratra lehibe. Azo atao koa ny mametraka amin'ny zona amin'ny fantson'ny mpandeha sy tank, na izany aza, io vahaolana io dia tsy ampiasaina raha tsy azo atao ny fidirana amin'ny fifandraisana lehibe.
Napetraka alohan'ny sy aorian'ny regulator valona mihidy, fametrahana ny toerany sy ny fikojakojana manaraka. Napetraka mijoro ny fitaovana.
Hitanisa ity pejy ity Ny electrolysis rano
Azo atao apetraka amin'ny toerana samihafa amin'ny rafitry ny rano ny fampihenan'ny rano:
fivorian'ny foibe - aorian'ny fantson'ny rano, valantsara lehibe sy sivana amin'ny tariby herinaratra lehibe. Mandritra ny fametrahana dia tsarovy ny fizotry ny calming ao ambadiky ny regulator ary momba ny fametrahana ny regulator rehefa avy nandro ny rafitra. Mametraka rano ny tsindry fototry ny rafitra iray manontolo.
fivoriambe zofona - eo amin'ny tsipika famatsiana hafanana rano mihidy sy fitahirizan-drano fitahirizana, raha ny tanjon'ny fametrahana ny fampihenana ny tsindry amin'ny rano dia ny fisorohana ny fanokafana ny fantsom-pifandraisana raha toa ka mihena ny fiasan'ny fandidiana. Izany dia ahafahana mihena ny fatran'ny fanaintainan'ny hafanana.
variana - ao amin'ny faritra fametrahana boiler fotsiny ary miaraka amina lohan'ny thermostat. Ny fisehoan'ny tetezana eo amin'ny tsindry dia mety hiseho eto, izay hiteraka fikatona ny valizy azo antoka. Amin'ity tranga ity, ny reducers pression dia tsy maintsy mifehy ny fikorianan'ny rano mafana sy mangatsiaka.
- amin'ny rafitra famatsianae.g. any amin'ireo trano haingam-pandeha ambony, amin'ny alàlan'ny rafitra fanentanana amin'ny tsindry izay ilana zana-tsindry bebe kokoa. Ny fampihenana ny tsindry amin'ny rano dia ampiasaina rehefa mihoatra ny 5 bara ny tsindry fitsaharana amin'ny rafitra na raha toa ny tsindry fitsaharana amin'ny fihenan'ny valle fiarovana (e.g. dia fanafanana rano) mihoatra ny 80% amin'ny tsindry fanokafana azy.
Ny tsindry amin'ny rano amin'ny sodina dia tokony hampifanaraka amin'ny fahafahan'ny fitaovana sy ny rafitra tafiditra ao amin'ny fametrahana ny rano. Avo loatra ny tsindry amin'ny rano mety hiteraka fahasimbana na tsy faharatsiana ny rafitra, koa ny fametrahana ny tsindry rano no nametraka ao anaty rafitry ny rano.
Ny singa miasa amin'ny reducer tsirairay dia miavaka manokana manify tompon'andraikitra amin'ny fampiasan'ny tsindry rano amin'ny rafitra rano.
Rehefa mahery vaika ny rano mandeha ny membra ao amin'ny reductor, atsangana ny lohataona, izay mampitombo ny tombo-kase ary mamela ny tsindry rano ilaina ho azo. Rehefa mihena ao ny haavon'ny tsindry dia milatsaka ny lohataona, mamela ilay rano hikoriana.
Misy karazany, matetika sarotra, vahaolana ampiasaina eo an-tsena fa amin'ny famakafakana rfitsipi-pifehezana fanerena ny rano ny tsirairay dia tsy miova: miara-miasa ny diaphragm, tombo-kase ary ny valve mba hihazona ny tsindry ivelany hidirana amin'ny ambaratonga azo antoka.
Matetika, ny fividianana ny fampihenana ny tsindry rano dia lasa filana, satria ny fampiasana azy dia miaro ny rafitry ny rano amin'ny tsy fahombiazan'ny vokatry ny famoretana ary fomba iray hampihenana ny fahaverezan'ny rano amin'ny rafitra.
Hitanisa ity pejy ity Ny rano malefaka
Ny fampihenan'ny tsindry rano dia ampiasaina rehefa:
ny tsindry fanamafisana rafitra dia mihoatra ny sanda azo ekena
mihoatra ny 80% ny tsindry fanokafana ny valiny
Ny fampiasana tsy tapaka mandritra ny fotoana fametrahana dia mety hampidi-doza ny famoretana tsy maharitra
mihoatra ny 5 bar ny tsindry fitsaharana amin'ny fametrahana
Ilaina ny mpanelanelana amin'ny tsindry amin'ny rano izay misy ny tsindry misy tambajotra (Famatsian-drano) dia avo loatra ho an'ny zavamaniry na fitaovana na misy fihenan-tsakafo tsindraindray.
Hitanisa ity pejy ity Miova ny osmosis
Raha amidy dia afaka mahita fitaovana marindrano isan-karazany sy vita amin'ny fitaovana isan-karazany ianao:
Cartridge (cartridge) reducer manana varahina misy varahina misy fifandraisana sy carte de-quéque miaraka amina sivana mesh sy tombo-kase izy ireo. Ity famolavolana ity dia mamela ny fametrahana dia nesorina miaraka amin'ny fefy fiarovana ho fanadiovana. Ny mekanika fampihenana ny tsindry amin'ny rano rehetra dia ao anaty cartridge ary tsy hanova ny filan'ny tsindry.
stainless steel reducers izy ireo dia tsy mahatohitra ny fizotran'ny lozam-pifamoivoizana noho ny fihenan'ny varahina. Ny farany ity dia lafo kokoa, fa hanao tsara kokoa noho ny fanjifana rano.
1 inch reducer pression ny rano, ¾ reducer na reducer 1/2 ny tsindry rano voafantina miankina amin'ny halavan'ny fantsona famatsiana. Ny fiaretan'ny reducers kely kokoa dia mitovy amin'ireo lehibe kokoa, ary voafantina tsara, dia maharitra mandritra ny taona maro.
ny faneren-tena amin'ny rano amin'ny sivana dia vahaolana tsara amin'ny fametrahana tsy misy sivana hafa. Ny sivana tsirairay ampiharina dia miaro ny fametrahana amin'ny fanimbana mekanika ary na dia simba aza, ny fanoloana ny reducer dia tsotra kokoa ary mora kokoa noho ny fanesorana ny tsy fahombiazan'ny fametrahana ny rano na fanoloana ireo fitaovana miasa ao. Zava-dehibe ny fanatanterahana fanadiovana tsy tapaka miaraka amin'ny alàlan'ny sivana fananganana ny fidinan'ny tsenan'ny rano.
mihena ny tsindry amin'ny rano amin'ny refy tsindry ny fanamboarana anatiny na ivelany dia manamora kokoa ny fampiasana sy mampitombo ny fampitaovana ny rafitry ny rano, manome famakiana haingana ny tsindry marina amin'ny rafitry ny rano.
reducer tsindry amin'ny rano miaraka amin'ny sivana sy tsindry fanerena dia vahaolana feno sy azo ampiasaina.
Ireo modely amin'ny alalàn'ny mpanara-dalàna dia misy tsindry amin'ny fananganana orinasa. Raha misafidy ny reducer tsindry rano lafo kokoa ianao dia afaka manamboatra sy manova ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny fanovana.
Hitanisa ity pejy ity Mpisotro
4.8 / 5 ( 25 vato )
ny castra fanerena ny ranony fomba fiasan'ny fampihenana ranony fomba fanadiovana ny fihenan'ny tsindry amin'ny ranony fomba hanitsiana ny fihenan'ny tsindry amin'ny ranony fomba fametrahana reducer tsindry ranoinona ny fampihenana ny tsindry ranotsindry reducer ho an'ny ranomihena ny tsindry amin'ny ranony tsindry mavesatra 1 santimetatra1/2 mihena ny tsindry rano1/2 santimetatra ny tsindry ranoReducer tsindry 2 santimetatra3/4 mihena ny tsindry rano3/4 mihena ny tsindry rano amin'ny refy fanerenany castra fanerena ny ranovidin'ny mihena ny vidin'ny ranomanadio ny tsindry rano amin'ny fanadiovanaNy fihenan'ny tsindry amin'ny rano mihenatsindry rano mihena ny herzfiverenan'ny rano mihena ny herz mandinikaNy fanerena ny tsindry amin'ny ranon-tantelybokotra fanalefahana ny menaka tantelyny fanerena ny faneren-tenamihena ny tsindry rano amin'ny fomba fiasa izaymihena ny tsindry rano amin'ny fanitsiana ny fanitsianany faneren-dranon-drivotra amin'ny fomba hametrahana azyleroy merlin mihena tsindry ranony tsindry rano mihena ny ranofanitsiana ny fihenan'ny ranony faneren-tena amin'ny rano amin'ny sivanareducer tsindry amin'ny rano miaraka amin'ny sivana sy tsindry fanerenamihena ny tsindry amin'ny rano amin'ny refy tsindryny fitsipiky ny rano mihena ny fitsipiky ny fiasa